Ifulethi lasehlobo laseCosta Brava
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Jordi izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi lasehlobo eCosta Brava, libanzi futhi likhanyayo! Inamakamelo okulala amabili nendlu yokugezela entsha. Indlu yeholide esitezi esiphansi ilungele imindeni, ngaphandle kwezitebhisi ezinokufinyelela okuyimfihlo ukusuka emgwaqeni. Ifanele izilwane futhi ilungele abasubathi abeza kule ndawo ukuze bagibele amabhayisikili. Inketho egalaji langasese. Indawo ekahle, imizuzu emi-5 uhamba ngezinyawo ukusuka ogwini lwase-S'Agaró kanye nokuhamba imizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha laseSant Feliu.
4.58 ·55 okushiwo abanye
4.58 · 55 okushiwo abanye
Sinolunye lwamabhishi angcono kakhulu e-Costa Brava, ebhishi laseSagaró-Sant Pol, cishe imizuzu emi-5 yokuhamba. Isikhungo sedolobha sikolunye uhlangothi, ukuhamba ngaphansi kwemizuzu eyi-10 nakho, kunolunye ulwandle olunokubukwa okuhle.
Ekugcineni sinomgwaqo oyindilinga osuka ebhishi laseSagaró uye edolobheni elingemuva komgwaqo, ngendlela efinyelelwa usuka efulethini. Ngama-cove amahle anamanzi acwebile okutshuza noma ukujabulela ukuzola nokubuka nje.
Inombolo yepholisi: HUTG-045002